यी हुन समयमै काम नसक्ने ठेकेदार कम्पनीहरु नामावली सहित, काम नगर्नेलाई कार्वाही गर्लान् गृहमन्त्रीले! - Nepali Online News Media-shikharnews.com
यी हुन समयमै काम नसक्ने ठेकेदार कम्पनीहरु नामावली सहित, काम नगर्नेलाई कार्वाही गर्लान् गृहमन्त्रीले!
२०७५ जेठ १४ सोमवार
काठमाडौं, १४ जेठ – गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले समयमै काम नसक्ने ठेकेदारलाई कार्वाही गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् । तर, उनले भने अनुसार समयमा काम नसक्ने कामदारलाई कार्वाही गर्छन गर्दैनन् भन्ने हेर्न बाँकी छ ।
चितवन जिल्ला प्रशासनले कार्यालयले विभिन्न सरकारी कार्यालयबाट कामका लागि ठेक्का लिने र काम नगर्ने ठेकदारहरुले नाम सार्वजनिक गरेको छ । सडक, सिंचाई र पुल जस्ता विकास निर्माणका काममा ठेकदार पक्षबाट मनपरि भएको छ । जिल्लाका बाटो, पुल, सिंचाइ गरी ३८ वटा आयोजनाका लागि १० वटा आयोजनाका ठेकदारहरूले आधा पनि काम गरेका छैनन् ।
सरकारी कार्यालयबाट हालसम्म ३८ वटा आयोजना ठेकेदारले लिएका छन् । जिल्लाका विकास निर्माणका सबै कामको ठेक्का १० वटाले लिएका छन् । ती सबै आयोजनाका शुरु गर्नु अघि नै कार्यालयबाट पेश्की लिने र काम अपूरै छाड्ने, ढिलासुस्ती गर्ने भेटिएको हो ।
चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार जिल्लाका विभिन्न सरकारी कार्यालयसँग ठेक्का आयोजना लिने र समयमा काम नगर्ने ठेकेदारको नाम लिस्ट तयार गरिएको हो ।
समयमै काम नसक्ने ठेकेदार कम्पनीहरुमा पृथ्वी निर्माण सेवा, काष्ठमाण्डप कन्स्ट्रक्सन प्रालि, त्रिशुल कन्स्ट्रक्सन, इको इन्जिनियरिङ, इभा इन लाइट कन्स्ट्रक्सन, नेपाल तराई निर्माण तथा डिप टुबेल, किसानमुक्ति डिप टुबेल, चित्रसारी डिप टुबेल, श्रीमन ड्रिलिङ एण्ड कन्स्ट्रक्सन, भीम ज्योति एआआरको नाम गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ । ३८ वटा आयोजनाको काम अलपत्र पार्ने यी ठेकेदार कम्पनीलाई कार्वाही होला कि नहोला भन्ने हेर्न बाँकी छ ।
चितवन गृहमन्त्रीकै गृह जिल्ला पनि हो । उनकै जिल्लामा कामको शुरु गरी बीचमै छोड्ने, ढिला सुस्त गतिमा काम गर्ने ठेकदारको विवरण प्रशस्तै भेटिएको छ । सो विवरण प्रशासन कार्यालयले गृहमन्त्रालयमा पठाइसकेको छ ।
समयमै काम नसक्ने ठेकेदार कम्पनीहरुमा
पृथ्वी निर्माण सेवा
काष्ठमाण्डप कन्स्ट्रक्सन प्रालि
इभा इन लाइट कन्स्ट्रक्सन
नेपाल तराई निर्माण तथा डिप टुबेल
किसानमुक्ति डिप टुबेल
चित्रसारी डिप टुबेल
श्रीमन ड्रिलिङ एण्ड कन्स्ट्रक्सन
भीम ज्योति एआआर